izay hatao any Zimbabwe Bolawyo ny 21-22-23-24-25 janoary ho avy izao. I Comores, Afrique du Sud, Zimbabwe, Zambie, Botswana no iray vondrona amintsika ao amin'ny vondrona E (faritra faha-6 sy faha-7 mitambatra). Izay ekipa voalohany amin'io vondrona E io no hiatrika ny dingana manaraka dia ny« 1ere fenêtre » hatao amin’ny volana febroary 2020. Any Algerie kosa no hihaona ny ao amin’ny vondrona A (faritra 1 sy 2 ) misy an’i Algérie, Cap-Vert. Any Liberia ny ao amin’ny vondrona B (faritra 3 ) misy an’i Ghana, Liberia sy Niger. Any Guinée équatoriale ny vondrona C (faritra 4) misy an’i Tchad, Guinée équatoriale, Gabon ary any Kenya ny vondrona D (faritra 5) misy an’i Érythrée, Kenya, Somalie, Soudan du SudaryTanzanie.
Fiomanan’ny ekipam-pirenena Malagasy